China KN95 fanamboarana sy orinasa | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
Ny saron-tava N95 dia iray amin'ireo saron-tava miaro zana-pototra sivy voamarin'ny NIOSH. "N" dia midika hoe tsy mahatohitra menaka. "95 ″ dia midika fa rehefa tratry ny tsiranoka fanandramana manokana, ny tsiranoka ao anaty sarontava dia ambany kokoa noho ny 95% noho ny fatran'ny sombiny ivelan'ny sarontava. Ny sandan'ny 95% dia tsy ny antonony fa ny kely indrindra. N95 dia tsy anaran'ny vokatra manokana. Raha mbola mahafeno ny fenitra N95 ary mandalo ny tsikera NIOSH, dia azo antsoina hoe "saron-tava N95". Ny haavon'ny fiarovana ny N95 dia midika fa eo ambanin'ny fepetra fanandramana voalaza ao amin'ny fenitra NIOSH, ny fahombiazan'ny fanivanana ny akora fanasiana sarontava amin'ny sombiny tsy misy menaka (toy ny vovoka, zavona asidra, zavona loko, zavamiaina bitika, sns.) Dia mahatratra 95%.
1. Fomba famoronana tsara tarehy kokoa sy fiarovana fiarovana ara-nofo maro sosona, izay afaka manivana ny sombintsombiny amin'ny fomba mahomby sy mandrisika fofona, vovoka, bakteria ary virus.
2. Filtration fanamafisana maro sosona, sosona mora azo amin'ny hoditra, lamba tsy tenona ivelany, sosona meltblown ary sosona sivana.
3.3D fanapahana telo-refy dia afaka manitsy ny mety amin'ny tarehy, manatsara ny fiarovana vokany, seamless fisaka, tsy misy fantsona ultrasonaly sisiny famehezana, tsara tarehy welding, avo lasitike elastika tarika, malalaka vatana famolavolana tsy handratra ny hoditra, ela ny fotoana tsy tery ary mitafy Mafimafy kokoa.
4. Ny interlayer adsorption electrostatic dia afaka mamoaka sombiny, ary ny sosona maro kokoa amin'ny sivana mandaitra miaro ny fahasalaman'ny rivotra.
Function sy fampiasana
Ny saron-tava N95 dia manana fahombiazan'ny filtration mihoatra ny 95% ho an'ny sombiny miaraka amin'ny savaivony aerodynamika 0,075µm ± 0,02m. Ny savaivony aerodynamika ny bakteria rivotra sy ny spora holatra dia miovaova eo anelanelan'ny 0.7-10 µm, izay ao anatin'ny fiarovana ihany koa ny saron-tava N95. Noho izany, ny saron-tava N95 dia azo ampiasaina amin'ny fiarovana ny taovam-pisefoana amin'ny singa bitika sasany, toy ny vovoka namboarina nandritra ny dingan'ny fitotoana, fanadiovana ary fanodinana mineraly, lafarinina ary fitaovana hafa. Izy io koa dia mety amin'ny ranona na tsy menaka tsy menaka novokarin'ny famafazana. Ampifandraiso amin'ny resaka entona manimba miovaova. Izy io dia afaka manivana sy manadio ireo fofona tsy fofonaina tsotsotra (ankoatry ny etona poizina), manampy amin'ny fampihenana ny fiparitahan'ny poti microbial tsy azo tsentsina (toy ny bobongolo, antracis, tuberculosis, sns.), Saingy tsy afaka manafoana ny aretina, ny aretina na ny loza mety hitranga amin'ny fahafatesan'ny olona.
Karazana: Saron-tava KN95 Ho an'ny olona: Mpiasa mpitsabo na mpiasa mifandraika amin'izany
Malagasy: GB2626: 2006KN95 Haavo sivana: 99%
Toerana famokarana: Faritanin'i Hebei Brand:
ohatra arahintsika: Fomban'ny amboara Karazan-desinfection:
habe: Fanamarinana kalitao: Manana
Fiainana talantalana: 3 taona Fanasokajiana fitaovana: Haavo 2
fenitra fiarovana: anaran'ny vokatra: Saron-tava KN95
seranan-tsambo: Seranan-tsambo Tianjin fomba fandoavam-bola: Taratasy fanamarinana na famindrana tariby
Apetraho hisaron-tava ilay sarontava, sariho hisintona ny tananao ary atosiho mankany amin'ny tavanao, miaraka amin'ilay tetezana lava orona eo ambony; hevi-dehibe: sarony ny orona, vava ary saokany, apetraho eo ambonin'ilay loha ny fehikibo ambony saron-tava, ny fehikibo ambany ao ambadiky ny vozona, ary apetaho amin'ny tendrony ny rantsan-tànanao eo amin'ny tadin'ny orona, andramo atao ny sisin'ny sarontava dia mifanentana amin'ny tarehy.
Fitehirizana sy fitandremana
1. Sasao ny tananao alohan'ny hanaovana sarontava, na aza mikasika ny lafiny anatiny amin'ny saron-tava rehefa manao sarontava mba hampihenana ny mety fandotoan'ny sarontava.
Ampahafantaro ny atiny sy ivelany, ambony sy ambany ny sarontava.
2. Aza esorina amin'ny tananao ilay sarontava. Ny saron-tava N95 dia tsy afaka manasaraka afa-tsy ny viriosy eo ambonin'ny saron-tava. Raha tsindroninao amin'ny tananao ilay sarontava, dia hisitrika miaraka amin'ny vongan-drano ny viriosy, izay hiteraka aretina mikraoba mora foana.
3. Miezaha hanao ilay sarontava mba hifanaraka tsara amin'ny tarehy. Ny fomba fitsapana tsotra dia: Rehefa avy nitafy sarontava dia manafoha mafy mba tsy hahafahan'ny rivotra mivoaka avy amin'ny sisin'ny sarontava.
4. Ny sarontava miaro dia tsy maintsy mifandray akaiky amin'ny endrik'ilay mpampiasa. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manaratra ny volombavany hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny tarehy ilay sarontava. Ny volombava sy izay apetraka eo anelanelan'ny gasket mask sy ny tarehy dia hahatonga ilay sarontava hivoaka.
5. Aorian'ny fanitsiana ny toeran'ny saron-tava arakaraka ny endrikao dia ampiasao ny rantsan-tànan'ny fanondro hanery ny tadin'ny orona manaraka ny sisin'ny masony mba hanakaiky ny tarehy.
Rehefa miseho ireto tranga manaraka ireto dia tokony hosoloina ara-potoana ny sarontava:
1. Rehefa mitombo be ny aretin'ny taovam-pisefoana;
2. Rehefa vaky na simba ilay sarontava;
3. Rehefa tsy afaka mifatotra akaiky ny sarontava sy ny tarehy;
4. voaloto ilay sarontava (toy ny tasy ra na rano mitete na zavatra hafa avy any ivelany);
5. voaloto ilay sarontava (ampiasaina amin'ny paroasy tsirairay na mifandray amin'ireo marary);
Previous: Fahasalamana manan-tsaina rehetra amin'ny milina iray
Sarontava fiarovana ara-pitsaboana azo ariana